FLB Music: odhiyo inoridza uye download maneja | Linux Vakapindwa muropa
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth FLB Music ndeimwe yevatambi ve multimedia varipo veLinux. Iyi software yakavakirwa paElectron, uye ine intuitive uye nyore kushandisa graphical interface. Uye zvakare, chinhu chakanaka nezve ichi odhiyo mutambi ndechekuti inosanganisa ese ari maviri mabasa kutamba uye kugadzirisa ako aunofarira playlists pamwe neyakabatanidzwa yekurodha maneja.
Iwe unozviwana mune mamwe mapositi eanozivikanwa madhisiki, kuti uise zviri nyore. Iwe unayo zvakare mu mapaketi Snap uye sei AppImage, kana iwe uchida aya mamwe mafomati kuti uise iyo bhanari pane yako distro. Rangarira kuti kana ukasarudza iyo AppImage, kana uchinge warodha pasi pasuru yacho uchafanirwa kuipa mvumo yekuuraya ...
Kana iwe uchinetseka nezve zvazvinogona kukupa FLB Music, heino pfupiso:
Yakareruka uye inokwezva GUI.
Tsigiro yekuronga mimhanzi nemaartist, maalbham, madhairekitori, uye rutsigiro rwemagadzirirwo erunyorwa.
Inoratidza mazwi enziyo.
Iyo inosanganisa maneja wekurodha pasi kurodha nziyo kubva kune epuratifomu mapuratifomu akadai seDeezer neYouTube.
Mini modhi kugadzira nzvimbo yemamwe mabasa patafura yako uchiteerera kumimhanzi.
Tsigiro yenyaya nyowani mune yayo interface.
FLB Mimhanzi matambudziko? Zvakanaka, sezvaungafungidzira kubva kune chimwe chinhu chinoshandiswa neElectron, hachizove chakajeka sezvaungade kuti chive. Iko kushandiswa kwehardware zviwanikwa neiyi odhiyo mutambi kunoitisa, kunyanya iko kushandisa RAM. Inofananidzwa nevamwe vatambi vakafanana veLinux, iyi FLB Music inoshandisa zvishoma kupfuura 500 MB, pamusoro pevamwe vakaita saDepin Music (200 MB), Sayonara (99 MB), kana musikcube (32 MB). Uyu mutengo wakakosha, kunyanya kana iwe usina michina ine simba yakakwana ine huwandu hukuru hwe RAM. Zvizhinji kana iwe uchironga kuishandisa pamwe nenzvimbo inorema yedesktop uye mabhurawuza seC Chrome, ayo asingamiriri pakuda kadiki diki ndangariro chaizvo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » FLB Music: odhiyo inoridza uye download maneja
Porteus Kiosk 5.3.0 inosvika ichionekana neFlash, ichigadziridza kuLinux 5.10.73 nezvimwe.